BBC Afaan Oromoo Raadiyoon tamsaasa harra galgala eegala - BBC News Afaan Oromoo
BBC Afaan Oromoo Raadiyoon tamsaasa harra galgala eegala
26 Amajjii 2018
BBC News baatiiwwan muraasaan dura Itoophiyaa fi Ertiraadhaaf, Afaan Oromoo, Amaaraa fi Afaan Tigreetiin fuula feesbuukii fi marsaritii irratti oduu fi odeeffannoowwan wayitaawaa tamsaasuu eegaluun isaa ni yaadatama.
Kaayyoo inni guddaan tajaajilawwan kanneeniis karaa gabaasawwan sagantaa isaatiin Itoophiyaa addunyaatti beeksiisuufi, addunyaa gara Itoophiyaatti dhiyeessudha.
Kunis ammoo qaawwa odeeffannoo kana dura ture gutuudhaan, carraa ummattoonni odeeffannoo gahaa itti argatan kan biraa kennuudha.
Ammas ALI'tti Wiixata, Amajjii 21 bara 2010 irraa kaasee afaanoota sadeeniinu, tamsaasa raadiyoo eegaluufi.
Raadiyoon BBC afaanoota sadaniinuu Wiixataa hanga Jimaataatti, yeroo hunda galgala sa'aatii 2:30 hanga 3:30tti kan tamsa'u yoo ta'u:
1.Sa'aatii 2:30 - 2:50 Afaan Amaaraatiin
2.Sa'aatii 2:50- 3-10 Afaan Oromootiin
3.Sa'aatii 3:10 - 3:30tti Afaan Tigreetiin dhyaata.
Sagantaalee raadiyoo kanneen keessatti oduuwwan wayitaawaa biyya keessaafi addunyaa kan dhiyaatu yoo ta'u, xumura sagantaalee hundaarrattis, barnoonni qophii afaan Inglizii daqiiqaa shaniif ni dhiyaata.
Kanaafuu, isinis karaa fuula Feesbuukii fi marsaritii keenyaa dowwachuun, tamsaasa raadiyoo keenya dabalatee, odeeffannoowwan dabalataa akka argattaniif isin affeerra.
Akkasumas, firootaafi hiriyoota keessan BBC'n Afaan Oromoo tamsaasa Raadiyoo eegaluusaaa hin dhageenye hundatti himuu dandeessu.
Akkuma kana duras fuula Feesbuukii keenya irratti nuuf gumaataa turtan, ammas yaada, gaaffii ykn komii yoo qabaattan nuuf qooduu hin dagatinaa. Nutis gammachuun simanna.
Tamsaasi Raadiyoo keenyaa Eessarratti argama?
Oduu BBC Afaan Oromoo karaa raadiyootiin dhaggeefachuudhaaf:
Akka Itoophiyaatti yeroo hunda Wiixataa hanga Jimaataatti galgala sa'aatii 2:50-3:10tti
Danbalii Gabaabaarratti MegaaHarzii 7,595, 11,720 fi 12,065 irratti
Irra deebiin ammoo galgala sa'aatii 3:50- 4:10tti
Danbalii gabaabaarratti MegaaHarzii 9,855 fi 15,490 irratti
Akkasumas karaa saatalaayitiin:
Arabsat (BADR4)- 11.966GHz, Horizontal - Transponder 15
Nilesat 201- 11.843GHz, Horizontal- Transponder 7
Hotbird 13D- 12.597GHz, Vertical - Transponder 94 irratti tamsa'a.
Viidiyoo Oromoon eebbaan waa eegalaatii, eebba fudhadhaa!